သဘာ၀သစ်သီး အစစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sunkist Juice Drink - YOYARLAY Digital Media and News
သဘာ၀သစ်သီး အစစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sunkist Juice Drink
Published: April 27, 20182:00 am Updated: August 5, 20203:46 pm
နွေရောက်လာပြီ ဆိုတော့ ရာသီဥတုက ပူချက်ပဲ…ဒီလို ပူအိုက်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေရတယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် ပင်ပန်းနေကြမှာပါ…အရမ်း ပူအိုက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အတောင့်တမိဆုံးက ဘာဖြစ်မလဲ မေးလာရင် “အေးစိမ့်နေတဲ့ သောက်စရာ တစ်ခုခုပဲပေါ့” လို့ ဖြေမိမှာပါပဲ…
အရသာလည်းရှိ ရင်လည်းအေးစေမယ့် သောက်စရာ ရှိနေပြီ ဆိုတာ သိထားပြီးပြီလား?
သဘာ၀ သစ်သီး အစစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sunkist Juice Drink လေ … လိမ္မော်နဲ့ လိုင်ချီး ဆိုတဲ့ အရသာ ၂ မျိုး ထုတ်ထားပြီး အချိုရည်ထဲမှာ အသီးဖတ် အစစ်လေးတွေလည်း ပါသေးတယ်…Gas တွေပါရင် မသောက်ချင်ဘူးမလား? သိတယ်… လုံးဝကိုမပါတာ…အဲဒါကြောင့်မို့ လူကြီး လူငယ် မရွေး ဘယ်သူမဆို စိတ်ချလက်ချ သောက်လို့ ဖြစ်တယ်…
ကဲ…..…နွေနေပူပူကို အန်တုဖို့နဲ့ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေဖို့ လတ်ဆတ်ပြီး အေးမြတဲ့ သဘာဝအရသာကို ခံစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ…
Super Market တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ ရနေပြီ ဆိုတာလည်း မှတ်ထားပေးဦးနော်!
Sunkist Juice Drink
Previous Previous post: ဂျပန်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး အမျိုးသမီးကြီး ကွယ်လွန်
Next Next post: ခါးနာသက်သာစေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ အကြောလျော့နည်းတွေ
OPPO F Seriesရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဖုန်းအသစ် OPPO F15 ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
ကမ္ဘာထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် OPPO က အပါးလွှာဆုံး ကိုယ်ထည်နှင့် 8GB+128GB၊ 48MP Quad-Camera၊ Hidden Fingerprint 3.0 နဲ့ VOOC 3.0 အမြန်အားသွင်းစနစ် ပါဝင်တဲ့ OPPO F15…
Published: April 27, 202011:35 am